Mountain Television nation's first popular and leading analytical news channel. Mountain covers all the latest news from Nepal, Political News, Science news, Social news, Sport news, Ecomony news, Business, Entertainment, Movie, Nepali Model, Actor, Actores, Audio, Video, Interview and many more. मोदीको सपथग्रहणमा कंगना र शाहरुख पनि – Emountain TV
काठमाडौं, १७ जेठ । भारतमा नरेन्द्र मोदी दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री पदमा निर्वाचित भएसँगै आफ्नो सपथ ग्रहण समारोहमा विभिन्न क्षेत्रका व्यक्तिलाई पाहुनाको रुपमा निम्त्याएका छन् ।
सो क्रममा उनले केही वलिउडका प्रभावशाली कलाकारहरुलाई पनि निम्तो दिए । यसमध्ये शाहरुख खान र कंगना रनोट समेत मोदीको सपथ ग्रहणमा सहभागी हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
मोदीले उनीहरुलाई यसअघि नै निम्तो दिएका थिए । उनीहरुसँगै सञ्जय भन्साली, रजनीकान्त, करण जोहर, विवेक ओवराय लगायत कलाकार उपस्थित हुँदै छन् । बिहीबार हुँदै गरेको समारोहमा उनीहरुसँगै थुप्रै वलिउडका कलाकार सहभागी हुने बताइएको छ ।
चुनावका बेला मोदीविरोधी अभियान चलाउँदा उनी केही वलिउडकर्मीसँग रुष्ट थिए भने केही कलाकारसँग राम्रो सम्बन्ध छ । यद्यपि, शाहरुख र कंगना भने मोदीको विपक्षीको रुपमा चिनिन्थे । कंगनाले त सार्वजनिक रुपमै सरकार तथा सत्तापक्षको स्थापित बिचारधारा र सांस्कृतिक मान्यतामाथि कडा आलोचना गर्दैआएकी थिइन् । यसपटक मोदीको निम्तोमा उनीहरु सहभागी हुन लागेको विषयलाई भारतीय मिडियाले महत्वका साथ प्रचार गरेका छन् । यो समाचार आजको अन्नपुर्ण पोष्ट् दैनिकमा लेखेको छ ।